Ambo Gara Galigalaa Lafatu Gaggaragalaa Kan Jedhan Egallaa Jira - Caboowanci.com-Oromia
Ambo Gara Galigalaa Lafatu Gaggaragalaa Kan Jedhan Egallaa Jira
November 25, 2015 November 27, 2015 Nadhani	28 Comments OLF, OMN, Oromo
Mootumaan Wayyane(TPLF) goototaa ummata ilmaan Ambooti raafammaa jirti.Magaala Ambo keessa loltoonii wayyaneeti marffamitee jirti. Ammaafi manneen barnootaa cufamaniruu. Barattoonni sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa dabalatee M/B akka seenaniin hundumtuu barumsa didaanii yahuun mormii mormii isaanii itti fufaniiru. Ammas hiidhaa fi ajjeechaan duubatti nu hindeebisu jedhu.
Mootumaan wayyane ABOn magaala kana keessa qubatee jira kan jedhuu shakkii qaba.Kanumaan kan ka'ee magaalii Ambo humina waraanaatin weraaramitee jirti. Namoonii kara irrati hin argamanii.
Namoonii karaa irrati argamanii qabamanii mana hidhaa keessati darbammamaa jiru.
Ha ta'uu malee fincilii kuns wagaa darbeen wal qabisiiseefi labissii magaalotaa Oromia waliin walqabata gaafii mirga Abba biyyummaa argannutti duubatti hin deebinu jechuun dargaggoota Oromoof akkasumaas qonnaan bultoota Oromoofi warreen hojjattoota Mootummaa taataanii diinaa jalaa jirtaan maraaf waamichaa keenya isiniif dabarsiinnerra jedhu.
By Alemayehu Tilahun
← Jeetiin Waraanaa Russia SU-24 Jedhamuu Turkiidhaan Dhahamee
Odduu Amma Nu Gahee →
28 thoughts on “Ambo Gara Galigalaa Lafatu Gaggaragalaa Kan Jedhan Egallaa Jira”
jabadhu qommo koo harka walqabanne jira injiffannon oromotaaf.
Baayyee namatti tola rabbi isaan haa milkeessu
Woow baayyee namatti tola jabaadhaa rabbi isin haa milkeessu
sila isiin namonni waa maxxansuu geettanis tahu afaanuma oromoo kana yoomuma sirnaan nuu barreesitu pls pls maal kan anbaa dubbanna……….
Yaa lammii koo bakkuma jirtanii uf duuba hin deebi’inaa barataan barsiisaan akkasumas hojjattoonni hidda oromoo taatanii mootummaa kana jala hojjattan cuftuu yeroon gayee jira.hujii keessaniif jettanii miidhaa saba keessanii caldhistanii hin ilaalinaa.koottaa harka wol qabannee haa kaanuu.yeroon amma.bakka nuti kaanetti woboonis nu dhaqaba.iyyaa iyya dabarsaa.
amboo biyyaa dhiraati jabadhaa oromoo jabadhaa oromoo amboo qofaa osoo hin tanee bakkumaa hundatti ibidda qabsisun didda agarsisu qabnaa
Your Commentjabaadha lammiiwwankooo
nuti ilmaan amboo yuunibersiitii jirru keessatti ammaa eegallee gayee keenya ni baana
Your CommentJabaadhaa lammii koo bakka hundaa haa kaanuuuuuuu.
November 25, 2015 at 14:59
Yaa oromo jabadhaa laftii barii geete
November 25, 2015 at 15:04
odeffaannoo hoo’aa nu biraan gahaa jiraachuu kessaniif galanni keessaan guddaadha
Ka’aa walkakaasaa! Yaa ilmaan dhiraa.
Jabbadha rabbiin isin bira haa jiraatu.
Jabaadhaa yaa ilmaan OROMOO!!!
Jabaadhaa jajjabee koo
Amoo qofaa miti garuu Amboo fakkeenya godhachuudhaan nutis haa kaanu bakkuma jiruu yaa Oromoo !!!
Amboo qofaa miti garuu Amboo fakkeenya godhachuudhaan nutis haa kaanu bakkuma jiruu yaa Oromoo !!!
ni tura malee ni urraa jette boombiin
dhiigni fi lafeen uummata oromoo oromiyaa deebisee ni ijaara
yoomiyyuu sodaan duubatti nu hin deebisu sanyii gootota irraa dhalatnee hoo kanneen akkaa taaddee birrruu,waaqoo guutuufi kkf eenyuun waamee fixa miti
baayyeedhaa seenaan haa himuu malee loli amboo biyyaa gootaa
Jabaadhaa ilmaan oromoo Ambo qofaa mitii hundi kennayyuu harka wal qabannee haa kaanuu
Gamanaan yoo falmatee gama kaanin rafe faaydan hin jiru kutaa tokko kun lama qofti diinaa ufirraa buqqisuu hin dandahuu yeroo ammaa maal eeydan
baay’ee namatti tola. tokkummaan humna ,jabinaa kanaaf qabsoomne fincila diddaa garbummaa kana ofirraa cabsuu qabns
ka’ii oromoo bakka jirtu hunda dirqamnii lammummaa Amboo qofarra hin jiru kana ka’a wal kakaasa
Dhiigni ilmaan keenyaa akkaa
Jigeen hin hafu.
yaa obbolootaa kenyaa mee kottaa waqqayyoo maal qabaa itiyoophiyaafi? ebbaa:: garuu obboloota mottumma waqqayyoo yoo latee malee enyuuyuu hin argaatu. Rome 13
kanaafuu mee isaa sammu kenyaa kessattii danqaara hamaa tadhee yadaa nama jibuu nu kessaa kahee hojii diyaabiloos kanaa maqaa iyasusiin monaa inni dhigaa dhangalasissudha hojissaa. mottumman garii: jalaala: nagaa. motiinshes nagaa kan tadhee han mottuma kana fana jiraatuus dhigaa motiichan han micaamedha. kanaaf dhigaa kenyaa diyaabilosiif lachuu dhisnee mee goftaa yesusiin akkas jenna iddoma jirruuratti motumma ke agarsiisu akka dandeenyuu nu gargarii. innis naga: jalalaa: motii hundaa dandaadha. kanaaf obbolota mottuma fanaas waqqayyoo fanaas maaf wallalla kottaa yaadaa hama sanaa of kessaa basnaa.
yoo na argaachuu fetaan
Keep going Oromoo we are with you, this is historical moment ❤️❤️
murteen dargagoota amboo fi jiraattota ishee sirriidhuma. Qabsoon kun oromoota hunda biraatti jajjabeeffamuu qaba.
jabaannee harka wal qabannee oromiyaa bilisa haa basaafnu. oromiyaaf bilisummaa!!!!
Yaa Oromoo Ka’i haga yoo dhiitamaa jiraattaa?
hagayoom wal irratti laaltaa ?
Ka’i walkakaasi diina of irraa kaasi
nufis guyyaan jira!